Ngụkọta oge nke ihe onwe-leveling n'ala
ịbịaru ọnụ ọgụgụ 1: 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10
obosara nke ụlọ X
ogologo nke ụlọ Y
Opekempe ọkpụrụkpụ F
Ngụkọta oge nke onwe-leveling ala
X - obosara nke ụlọ
Y - ogologo nke ụlọ
Tụọ elu dị na nkuku anọ nke ụlọ ahụ, na ihe A, B, C, D.
Iji mee nke a, na-eji ụlọ larịị.
Nịm kacha nta ọkpụrụkpụ nke isi mmiri n'ala. Nke a size ga-akpaghị aka etinyere na ala n'ókè nke ụlọ.
Nke a ga-gbakọọ ego nke chọrọ ihe na cubic mita na ịtọ elu na nkuku nke ụlọ ahụ.
Mmemme ga gbakọọ ego nke ihe maka onwe-leveling n'ala na-elu dị iche na nkuku.
Ị ga-enwe ike n'ụzọ ziri ezi karị gbakọọ na-eri nke ihe.
Isi uru nke onwe-leveling n'ala ahụ pụrụ iche leveling onyinye, nke a na-eji maka ya, ike a ewepụghị na ezigbo elu na-enweghị ihe ọ bụla mmezi mgbalị na gị. Ọ bụ ya mere ndị dị otú ahụ ala taa nweela pụrụ iche ewu ewu.
Yet ala nwere ike ịbụ onwe ha. All na a chọrọ bụ ịmara ogologo ya ma obosara nke ụlọ ahụ, ịdị elu ya na nkuku, nakwa dị ka a kacha nta ọkpụrụkpụ nke rijuru afọ, na mgbe ahụ anyị usoro ihe omume ga gbakọọ n'ihi na ị ego nke ihe onwunwe jupụta na inclines.
1. The elu nke ndị dị otú ahụ ala dị larịị, na-enweghị seams na gaps.
2. The ọrụ ndụ nke onwe-leveling ala na-abịa 40-50 afọ.
3. Eyi eguzogide.
4. Unu achọ pụrụ iche na-elekọta.
Tojupụtara dịanyā n'ala bụ ezigbo mfe, ya mere ọtụtụ ndị na-ahọrọ ime ya n'onwe gị n'ejighị ọkachamara. Ma e nwere ụfọdụ ụzọ aghụghọ.
Ya mere, tupu ị na-amalite na-ebikwasị n'ala ọ dị mkpa iji dozie ụlọ. Iji mee nke a, wepụ ochie flooring, baseboards na ibo ụzọ. The n'ala n'elu na-arịwanye elu. Nke a nwere ike mere iji a pụrụ iche igwe sanding ma ọ bụ waya ahịhịa. Mgbe ahụ, ọ bụrụ na e nwere cracks n'ala, ha igosipụta iji a triangular akpụcha.
Cheta na ọ bụrụ na ị na-aga dina dịanyā n'elu a osisi n'ala, ọ ga-mesikwuru na a pụrụ iche tupu okporo.
Mgbe ahụ na-eji tụrụ atụ n'akuku slats n'ala. Dị ka a na-atụ bụ mere na mgbidi nke akara nke elu nke n'ala ga-awụkwasị. N'oge a dị elu, gbakwunyere 2,5 centimeters, mgbidi na-kpochara si stucco na ndị ọzọ na finishing ihe.
Mgbe ahụ, n'ala na-kpochara na degreased ọzọ na a pụrụ iche ntụ ntụ.
Ugbu a n'ala na-kwekọọ ngwọta smeared cracks na crevices smoothes ụfọdụ. Mgbe ahụ, n'ala dị mkpa ka a primed. Ma na nke a preparatory ogbo dechara. Ị pụrụ ịmalite na ayak n'ala.
Ịtọ n'ala dịanyā
Jupụta n'ala evenly na-nnyemaaka ga-igwakorita ngwọta ruo mgbe ị jupụta.
Kwadebe a ngwọta dị ka ngwugwu ntụziaka. Iji ihe ngwọta bụ homogeneous, adịghị jupụta tank ozugbo mmiri niile. Ka a na-a nnukwu akụkụ nke ya. Ọ igwakorita ngwọta. Iji mee nke a, ọ kacha mma iji ihe electric dakpuo na a pụrụ iche nozulu. Ma ọ bụ naanị mgbe ngwọta na ghọọ a homogeneous uka, wụsa fọdụrụ na mmiri na ya.
Mmekọahụ wụsara n'elu kwupụta ụzọ nke ọnụ ụzọ na ndị na-abụghị akụkụ nke ụlọ. Ngwakọta e wụsara na òkè, onye ọ bụla mgbe kwado elu iji a agịga ala. Nke a na-enyere aka wepụ ikuku egosipụta nke nwere ike a tọrọ atọ ngwọta na-enye a edo mkpuchi.
Ịgwa otu òkè ọzọ oge ekwesịghị ịbụ ihe karịrị 10 nkeji.
N'oge ihicha n'ala, ma ọ bụ 3-6 awa dabere na ika nke ngwọta ma zere drafts na ụlọ okpomọkụ mgbanwe.